Usuku lweSihobe lwaMazwe ngaMazwe. Imibongo emi-6 yokubhiyozela. | Uncwadi lwangoku
Ukufota: Agrelo Beach. Bueu. URía de Pontevedra. (c) UMariola Díaz-Cano.
Namhlanje, nge-21 kaMatshi Usuku lweSihobe lwaMazwe ngaMazwe. Leliphi ixesha elingcono lokuyibhiyozela kunye primavera kukhutshwa nje, nokuba kusabanda. Abo kuthi banomdla ngakumbi kwaye prosaic banentliziyo yethu encinci yemibongo esiyihambisa ngamaxesha ngamaxesha okanye kufuneka siyibethe. Ke ndiyishukumisile eyam kancinci kwaye ndakhetha ezi 6 imibongo phakathi kwezinto ezininzi ezikhoyo kwaye uyisuse kum.
yakhe zakudala kunye namaxesha ahlukeneyo. Kumakhaya ethu angenakonakala IQuevedo, UGarcilaso, IGutierre de Cetina y URosalía de Castro. Kwaye isuka eBritane URudyard Kipling noRobert Burns. Ngokuqinisekileyo uyazi, kodwa zinokufundwa ngaphandle kokuphumla. Ewe ewe, singaze siswele imibongo.
1 UFrancisco de Quevedo
1.1 Unokuvala amehlo am
2 IGarcilaso de la Vega
2.1 I-Sonnet V
3 IGutierre de Cetina
3.1 Amehlo acacileyo, aqinisekileyo (Madrigal)
4 URosalia de Castro
4.1 Bathi izityalo azithethi, akukho mithombo, nazintaka
5 URudyard Kipling
6 URobert Burns
6.1 Ngeentsuku ezindala ezimnandi (Auld Lang Syne)
UFrancisco de Quevedo
Unokuvala amehlo am
Vala amehlo am okokugqibela
isithunzi, ukuba imini emhlophe iyakundithatha;
kwaye ungawukhulula lo mphefumlo wam
iyure, ekulangazeleleni kwakhe okuthandabuzekayo:
kodwa hayi enye indawo elunxwemeni
izakushiya inkumbulo, apho yatshisa khona;
ukuqubha kuyazi ilangatye lam amanzi abandayo,
Kwaye ulahlekelwe yintlonipho ngomthetho onzima.
Umphefumlo, kuye kwathiwa thixo wonke wentolongo,
Iimvumba, yintoni into ehlekisayo kumlilo omninzi abanike wona,
Imitshato, esele itshile ngobuqaqawuli;
baya kuwushiya umzimba wakho, hayi inkathalo yakho;
Baya kuba luthuthu, kodwa iya kuba sengqiqweni;
baya kuba luthuli, nothuli ngakumbi eluthandweni.
Xa ndizivuma ndinetyala kuwe;
IGutierre de Cetina
Amehlo acacileyo, aqinisekileyo (eMadrigal)
Amehlo acacileyo, aqinisekileyo
ukuba unconywa ngenkangeleko entle,
Kutheni, ukuba ujonga kum, ujongeka ngathi unomsindo?
Ukuba uzimisele ngakumbi,
ubonakala umhle ngakumbi kulowo ukujongileyo,
kuba awubonakali mhle.
Owu, ziintlungu eziqatha!
okoko undijonge njalo, undijonge noko.
URosalia de Castro
Bathi izityalo azithethi, akukho mithombo, nazintaka
Bathi izityalo azithethi, akukho mithombo, nazintaka,
Nokuba angalitshangisanga ngamarhe akhe, zingenakukhazimla kwakhe iinkwenkwezi,
Bayayithetha, kodwa ayiyonyani, kuba rhoqo xa ndigqitha,
Ngam ukumbombozela kwaye bayadanduluka:
-Ukuba uphambene umfazi ophuphayo
Ngomthombo ongunaphakade wobomi kunye namasimi,
Kwaye kungekudala ngokwaneleyo, kungekudala, iinwele zakho ziya kuba ngwevu,
Kwaye ubona, engcangcazela, ebanda, ukuba iqabaka ligubungele idlelo.
Kukho izimvi entlokweni yam, Kukho iqabaka engceni;
Kodwa ndiyaqhubeka ndiphupha, ndihlwempuzekile, ndingalali,
Ngomthombo ongunaphakade wobomi ophelayo
Kunye nokuhlaziya okungapheliyo kwamasimu kunye nemiphefumlo,
Nangona ezinye zibunile kwaye nangona ezinye zitshisiwe.
Iinkwenkwezi kunye nemithombo kunye neentyatyambo, musa ukumbombozela malunga namaphupha am,
Ngaphandle kwabo, ungakuncoma njani okanye ungaphila njani ngaphandle kwabo?
Ukuba uyakwazi ukugcina intloko xa yonke into ekujikelezile
ulahlekelwe yeyakho kwaye bakusola ngayo;
Ukuba unokuzithemba xa wonke umntu ekuthandabuza,
kodwa uyavuma namathandabuzo abo;
Ukuba unokulinda ngaphandle kokudinwa kukulinda,
okanye, xa ulahlekiswa, musa ukuhlawula ngobuxoki,
nokuba uthiyiwe, ungathandi;
kwaye kungabonakali kulunge kakhulu, kwaye ungathethi ngobulumko;
Ukuba ungaphupha-kwaye ungenzi amaphupha utitshala wakho;
Ukuba uyakwazi ukucinga-kwaye ungenzi iingcinga zibe yinjongo yakho;
Ukuba unokuhlangabezana noloyiso kunye nentlekele
Baphathe abo bakhohlisi babini ngokufanayo
Ukuba uyakwazi ukunyamezela ukuva inyani oyithethileyo
Ukujijwa ngabangendawo ukwenza umgibe wesidenge
Okanye ubone izinto ezaphukileyo ozibeke ebomini bakho
kwaye ugoba kwaye wakhe kwakhona ngezixhobo ezigugileyo;
Ukuba ungenza lukhulu ngazo zonke izinto oziphumeleleyo
kwaye ubungozi emngciphekweni wamathuba,
kwaye ulahlekelwe, kwaye uqale ngaphaya kwasekuqaleni
kwaye ungaze uthethe nelilodwa malunga nelahleko yakho;
Ukuba unokuyichukumisa intliziyo yakho kunye nemithambo kunye neetoni
ukudlala ithuba lakho ixesha elide emva kokuba zichithwe
kwaye ke ikugcine xa kungekho nto iseleyo ngaphakathi kuwe
ngaphandle koMyolelo othi kubo: "Xhathani!"
Ukuba uyakwazi ukuthetha nezihlwele kwaye ugcine isidima sakho
okanye uhambe nookumkani kwaye ungalahli ukuqonda;
Ukuba akukho zintshaba okanye abahlobo abathandekayo abanokukwenzakalisa;
Ukuba bonke babala kuwe, kodwa akukho namnye kakhulu;
Ukuba unokugcwalisa lo mzuzu ungalibalekiyo
ngohambo lwemizuzwana exabisekileyo engamashumi amathandathu.
Yeyakho umhlaba nako konke okukuwo,
Ngaphezu koko, uya kuba yindoda, nyana wam!
Ngeentsuku ezindala ezimnandi (Auld Lang Syne)
Ngaba abahlobo bakudala mabalibaleke?
kwaye ungaze ubakhumbule?
Ngemihla yakudala mhlobo wam
Siza kuba neglasi yobuhlobo
Sobabini sibaleke sathambeka
ndaza ndancothula iintyatyambo ezintle,
kodwa besiphazama kakhulu ngeenyawo ezibuhlungu
kususela kwimihla yakudala.
Siye sawela umlambo sobabini
ukususela emini ukuya kwisidlo sangokuhlwa,
kodwa ulwandle lubanzi phakathi kwethu
Nasi isandla, mhlobo wam othembekileyo,
kwaye usinike esinye sezandla zakho,
kwaye masisele ibhiya
Kwaye uya kuhlawula isiselo sakho.
Kwaye ndiqinisekile ukuba ndizakuhlawula eyam ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » Usuku lweSihobe lwaMazwe ngaMazwe. Imibongo emi-6 yokubhiyozela.